13 Ciyaartoy Ayaan Haystay Oo Mid Ayaa Dhaawacmay…" – Jurgen Klopp Oo La Calaacalay Dhaawacyada Hadheeyey Kooxdiisa
Saturday January 04, 2020 - 02:37:02 in Wararka by Editor Caynaba News
Liverpool ayaa ciyaaryahanno soo nastay oo firfircoon la shir iman doonta kulanka Merseyside derby ee Axadda
ay iskaga hor iman doonaan Everton oo wareegga 3aad ee FA Cup ay ku ballansan yihiin.
Liverpool oo xalay uu ka dhaawacmay kubbad sameeyaha Naby Keita, ayaa waxay Axadda waayi doontaa Dejan Lovren, Joel Matip, Fabinho, Shaqiri iyo Chamberlain oo dhamaantood dhaawacyo ku maqan, hase yeeshee waxa culayska weyn ka yara dejinaya saxeexa cusub ee Takumi Minamino oo fursad u haysta in kulankii ugu horreeyey uu u ciyaaro Liverpool, sidoo kalena Nat Philips oo daafaca ka ciyaara ayaa kasoo laabtay amaah uu ugu maqnaa Stuttgart oo rajaynaya inuu xidho funaanadda kooxdiisa.
Tababare Jurgen Klopp ayaa ballanqaaday in in uu isbeddel ku samayn doono kooxdiisa kulankan, isla markaana uu keeni doono ciyaartooyo soo nastay oo aan wax daal ah qabin.
Curtis Jones, Neco Williams iyo Harvey Ellitons oo ka tirsan da’yarta Reds ayaa kursiga kaydka kusoo bilowday kulankii Sheffield United, waxaana daqiiqaddii ugu dambaysay beddel kusoo galay Elliott.
Klopp ayaa waxa uu sheegay in kaliya 13 ciyaarood oo kooxda koowaad ah ay u caafimaad qabaan, taasina ku keenayso in uu nasiyo kuwa ugu muhiimsan si ay ugu caafimaad qabaan oo ay kulamada horyaalka Premier Leagu ee soo aaddan ugu ciyaaraan.
Waxa aan haystaa 13 ciyaartoy oo kooxda koowaad ah oo marxaladdan soo gaadhay, haddana 12 ayay noqdeen. Takumi ayaa noo iman kara oo 13 naga dhigi kara.” Sidaa waxa yidhi Jurgen Klopp oo qirtay in dhibaato dhaawacyo ahi haysato kooxdiisa.
Klopp waxa uu sheegay in aanu Carlo Ancelotti usii sheegi doonin shaxda uu kula ciyaari doono, laakiin uu ku go’aan qaadan doono warbixinta caafimaadka ee qaar ka mid ah xiddigihiisa, laakiin ay hubaal tahay in lugo firfircoon uu keeni doono Anfield kulankaas.